Ciidamo ka tirsan AMISOM oo qarax lagula eegtay muqdisho – Radio Daljir
Febraayo 17, 2019 11:29 b 0
Kolonyo Ciidamada AMISOM ayaa maanta qaraxyo miino lagula eegtay agagaarka Isgoyska Ex Koontarool Balcad ee degmada Huriwaa, iyadoo warar kala duwan ka soo baxayaan.
Qaraxyada ayaa si aad ah looga maqlay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho, waxaana kolonyada la qarxiyay ay aheyd mid wadada mareysay.
Ciidamada AMISOM ayaa qaraxa kaddib waxay fureen rasaas culus, taasoo aan si rasmi ah la ogeyn khasaaraha ay sababtay.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in kolonyada AMISOM ay waxyeelo soo gaartay, sidoo kale ay jiraan dad rayid ah oo wadada marayay oo iyana wax gaareen, balse si rasmi ah looma oga inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha.
Inta badan Ciidamada AMISOM ayaa qaraxyo lagula eegta Suuqa Xoolaha illaa Isgoyska Ex Koontarool Balcad.
Wasiirkii hore wasaaradda cafimaadka Puntland oo sheegay in shaqalaha wasaaradaas 48 bilood aysan qadan mushaar (Daawo)